Ngingazithola yini izici ezibalulekile zokwenza injini yokusesha kuchazwe?
Uma unebhizinisi le-intanethi, cishe uyazi isisekelo sokwenza ngcono injini yokusesha. I-SEO yindlela ephilayo yokugqugquzela isayithi lakho ku-Google futhi idonse ithrafikhi engaphezulu. Ngokusebenzisa amasu wokusebenzisa injini yokusesha, uthola ithuba lokuthuthukisa ukuqashelwa komkhiqizo nokukhuthaza ukuthengisa. Ngaphezu kwalokho, ngosizo lwe-SEO, uthola ithuba lokudlulisa izincintiswano zakho ze-niche emakethe futhi ufike ku-TOP imiphumela yosesho. Ukusebenza kwe-injini yokusesha kuyindlela yokwenza imali eningi kakhulu ehlinzeka ngokubuyisela okuphezulu kakhulu ekutshalweni kwezimali.
Kunamasu amaningi ahlukene ongawasebenzisa kusayithi lakho. Ungazama konke kusuka kusixhumanisi sokwakha kumagama angukhiye usebenzisa. Amathuba akho awunaphakade lapho ungasebenzisa ngokuphumelelayo amasu okuvuselela ukuvuselela injini yokusesha. Indlela engcono kakhulu yokubona imiphumela oyifunayo nokuhlangabezana nezidingo zebhizinisi lakho ukukwazi ngokugcwele izimpumelelo ze-SEO. Kumelwe nakanjani ukhumbule ukuthi yini ebaluleke kakhulu uma kuziwa kumaqhinga wokuthuthukisa injini nokuthi uyazuza kanjani kubo. Lolu lwazi luzokusiza ukuba ugxile ezintweni ezifanele kakhulu futhi eziphumelelayo kumasu akho wokuthuthukisa isayithi. Lesi sihloko senzelwe ukuchaza izinsizakalo zokusungula injini yokusesha kanye ne-SEO impumelelo yezici ezingathuthukisa isayithi lakho lezinga.
Ingxube ephelele yezinguquko ze-SEO
Kufanele ukuphawula ukuthi ayikho into eyodwa ephuma ngaphandle. Ngaphezu kwalokho, akekho i-SEO factor engakunika isiqinisekiso ngaphezu kwazo zonke ezinye. Noma ubani angakuqinisekisa embonini ye-injini yokusesha njengoba kungekho ulwazi olunembile ukuthi izinjini zokusesha zibeka kanjani amawebhusayithi. Kungachazwa ngokugxila ekusetshenzisweni kwezihloko ezilungisiwe njengendlela efanele yokusebenza kahle. Ngokudala isihloko se-HTML sekhwalithi, ungathuthukisa i-SEO yakho engenzeka. Noma kunjalo, isihloko se-HTML esiboniswa ekhasini elinomthamo wekhwalithi ephansi ngeke unikeze noma yimuphi umphumela. Leli cala libonisa ukuthi azikho izinqamuleli embonini ye-SEO. Uma okuqukethwe kwakho kungabalulekile futhi kuyingqayizivele, ngeke uthole ukunyuswa kwesilinganiso. Yingakho ukuba ne-SEO factor engaphezu kweyodwa kungathuthukisa amathuba akho ukuphakamisa ukuqwashisa brand yakho nokuheha amaklayenti angenzeka kusuka usesho.
E-page SEO izici
Udinga ukuqaphela izici ezahlukene ze-SEO ukuthuthukisa isayithi lakho SEO. Ungaba nokulawula okugcwele phezu kwezinto zakho ze-SEO ezisekhasini. Kusho ukuthi ungathonya imiphumela yakho yesayithi ye-SEO. Izihloko ze-SEO ezisekhasini ongakwazi ukulawula ngokugcwele nokuthuthukisa zibandakanya ikhwalithi yalokho okuqukethwe okushicilelayo, uhlobo lwezinkomba ze-HTML ozibekayo kuwebhusayithi yakho kanye nesistimu yangaphakathi yokuxhumanisa. Udinga ukuhlela ngokucophelela indlela oya ngayo lezi zici ze-SEO ezisekhasini ukuze uthuthukise abasebenzisi besipiliyoni ngewebhusayithi yakho.
I-Off-page izici ze-SEO
Akubalulekile kakhulu ukuba ube nokulawulwa kwezici zokulungisa indawo. Awukwazi ukulawula ngokuqondile lezi zici. Noma kunjalo, ungabathinta kakhulu. I-off-page SEO izici zibhekisela kumasu wokwakha isixhumanisi. I-Google ithatha ukukhishwa kwekhasi elikude njengesici esibalulekile sokubala njengoba izici ezingenhla kwekhasi azikwazi ukulawulwa umshicileli wokuqukethwe kwe-rankings. Izixhumanisi zekhwalithi ezivela emithonjeni enegunya zidlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni igunya lewebhusayithi emehlweni enjini. Ngaphezu kwalokho, udinga ukudala okuqukethwe kwekhwalithi ukukhuthaza abasebenzisi ukuthi babelane ngakho futhi baxhumane nayo Source .